သင့် iPhone နှင့် iPad ၏ပုံစံကိုမည်သို့ခွဲခြားမည်နည်း အိုင်ဖုန်းသတင်း
အိုင်ပက်ဒ်သတင်း | | အိုင်ပက်, သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
ကျွန်ုပ်တို့လက်၌ရှိသည့်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်အိုင်ပက်အတိအကျကိုဖော်ထုတ်ရန်တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲသည်။ တစ်ခါတစ်ရံမျိုးဆက်များကြား၌ပင်ထိုကိရိယာများသည်အလွန်ဆင်တူသည်။ Apple သည်ပုံစံအတိအကျကိုအလွယ်တကူသိနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရေးထိုးထားခြင်းကိုမသုံးပါ။ စံပြကိုသိသော်လည်းအကြိမ်များစွာ၊ တခါတလေကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတာအားလုံးဟာကိန်းဂဏန်းအစီအစဉ်တွေဖြစ်တယ်၊ ငါတို့သိတဲ့နာမည်တွေကိုဘယ်လို extrapolate လုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရန်လိုအပ်သည်၊ တိကျသောလက်မှတ်ကို download လုပ်ရန်ဥပမာ၊ မော်ဒယ်တစ်ခုစီနှင့်ကိုက်ညီသောဖိုင်များမတူညီသောကြောင့်မှားယွင်းသောဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းသည်အချိန်ကုန်စေသည်။
ထို့ကြောင့်၊ ပထမမျိုးဆက်မှ iPad မော်ဒယ်များနှင့် 3GS မှ iPhone မော်ဒယ်များအားလုံးပါ ၀ င်သည့်စားပွဲအချို့ကိုပြင်ဆင်ထားပြီး ၄ င်းတို့ရရှိနိုင်သောအရောင်များနှင့်စွမ်းရည်များအပါအ ၀ င်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ၊ iPad Mini GSM (သို့) GSM + CDMA ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့တာပဲ ဘယ် firmware ကိုသင်နှင့်ကိုက်ညီ မှားသောအရာကိုမကူးပါနှင့်။ ¿ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်မော်ဒယ်ရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိရမလည်း? သင့်စက်၏နောက်ကျောကိုအက္ခရာများဖြင့်ကြည့်ပါ။ ဇယားရှိ« Model »ကော်လံရှိ item နှင့်ကိုက်ညီသောကုဒ်ကိုရှာဖွေပါ။ ကိရိယာအားလုံးမှာအဲဒီကုဒ်ကိုထွင်းထားတယ်။
* ဤမော်ဒယ်များအပြင်၊ တရုတ်မှသီးသန့်ဖြစ်သော iPhone 3GS A1325၊ iPhone 4S A1431 နှင့် iPhone5A1442 ရှိသည်။
သင် "Rev A" မူကွဲကိုသင်တွေ့ရသောထုတ်ကုန်များသည်aကိုရည်ညွှန်းသည် လွှတ်တင်ပြီးနောက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည် update ကို ထုတ်ကုန်၏။ ၎င်းသည် iPad 2G တွင်ရောင်းချဆဲဖြစ်ပြီး ၁၆GB နှင့် WiFi စွမ်းဆောင်ရည်များ၌သာရှိပြီး၊ iPhone 16 သည် 4GB စွမ်းရည်ဖြင့်သာရောင်းချနိုင်သေးသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - IOS7Beta6ကို Download လုပ် Link များ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » သင့် iPhone နှင့် iPad ၏ပုံစံကိုမည်သို့ခွဲခြားမည်နည်း
ဒါပေမယ့်ဒီစားပွဲကမှားတယ် iPhone4တွင် 16, 32, 64 GB ရှိသည်
မဟုတ်ပါ။ Apple ၏ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာဖြင့်အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။
ငါ 64. နှင့်အတူခိုးကြောင်ခိုးဝှက်။ ငါပြောချင်သောအရာကိုပထမ ဦး ဆုံးအိုင်ဖုန်း416 သို့မဟုတ် 32 ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 8 မဟုတ်ပါဘူး။
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်။ တစ်နေ့လုံး upload လုပ်ပါ့မယ်
iBooks ဖြင့်စတင်ခြင်း (၁) - App ကိုပထမ ဦး စွာကြည့်ပါ